Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 14 Oktobra 2019	• 2 Comments
Ny fikomiana farany sy ny mpanao fihetsiketsehana ny toetrandro dia miantso anao handondona vola bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampidirana rafi-pandoa hetra manerantany. Aiza any Shina sy India izy ireo dia tsy mandray anjara amin'ny fanjavonan'ny toetrandro sy ny fitrandrahana herinaratra ao Shina no mamboly ny tany izay vokarin'ny 3x mihoatra ny famokarana herinaratra manontolo […]
Filed in Fikomiana mihintsy, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 10 Oktobra 2019	• 5 Comments
Ao ambadiky ny fikomiana extinction dia misy ny fikambanana matihanina satria fantatsika avy amin'ireo revolisiona miloko efa nampiasain'ny CIA efa am-polony taona nanala ny "mpanao didy jadona" ary nametraka ny dikan-demokrasia amerikanina. Fomba iray amin'ny 'fihetsiketsehana milamina' amin'ny fotoana fety tahaka ny andro manankarena miaraka amin'ny mozika be sy ny fivoriana fialokalofana, izay misy […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 10 Oktobra 2019	• 1 Comment
Somary mampihomehy kely ny fihetsik'ireo mpanao politika holandey omaly tamin'ny fanafihana Tiorka tany Syria Avaratra. Tao anatin'ny gazety iraisampirenena nandritra ny andro maro no nanatonan'i Torkia ny Etazonia ary nanaisotra ny tafiny i Trump hanolotra ny fanafihana Tiorka. 'Mustard aorian'ny sakafo' […]
Andian-jiolahy mpamono môtô izay mampamono olona rehetra, Mocro Mafia, manafika ny Parool sy Telegraaf (farafaharatsiny, ny sary dia tsy maintsy mino antsika). 'Avy amin'ny Vondrona Eropeana sy manohitra ny fanatontoloana' mifanohitra amin'ny 'entona feno hatrany amin'ny afovoany'. Ireo deniers momba ny toetrandro mifanohitra amin'ny 'hiditra ao aminy ao anatin'ny 12 taona'. Nationalists hanoherana ny Islamisma. Ireo mpino media dia mifanohitra amin'ireo mpiampanga vaovao sandoka. Izahay dia vavolombelon'ny […]
Ny tantara 'fanafana' eran-tany dia lalao vita tsara izay misy ny politika, ny haino aman-jery ary ny olo-malaza manana andraikitra lehibe. Tsy azo lavina fa ny fampahalalam-baovao sy ny politika dia nampifandray ny hetsika ara-politika havanana amin'ny 'deniers' (deniers) sy ireo mpanohana ny teôlôjika. Antsoinay hoe 'fananganana marika' na 'marenitra' ity asa ity. Izay […]
Andian-tsoratra ho an'ny resaka (TTS) sy holograma toa an'i Microsoft Hololens 2
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 27 September 2019	• 4 Comments
Betsaka ny mbola tsy misalasala momba ny hevitra hoe afaka miaina amin'ny tontolo virtoaly isika amin'ny ho avy. Izay toerana ampiasantsika ny fantsom-pifandraisana miadana amin'ny bandy ho an'ny atidohantsika, toy ny maso, sofina, orona, lela, hikasika sy ny toy izany, ny BCI (Brain Computer Interface) avy amin'ny Neuralink (iray amin'ireo orinasa Elon Musk) dia efa ao amin'ny [ ...]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 25 September 2019	• 4 Comments
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, dia nanontany matetika aho hoe maninona no tsy namoaka boky. Efa fantatro sahady fa ho avy ny boky, fa mbola ho toy izany ny sary. Angamba izany no voalaza tsara indrindra eo am-piandrasana ny fahavitan'ny fisintonana rakitra ao amin'ny […]
Total visits: 12.936.795